TLEE Spas inofumura ichangoburwa chirongwa: Willowbrook Spa kuThe Lake House kuCanandaigua
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » TLEE Spas inofumura ichangoburwa chirongwa: Willowbrook Spa kuThe Lake House kuCanandaigua
Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • misangano • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Willowbrook Spa kuThe Lake House kuCanandaigua
TLEE Spas, inozivikanwa pasi rose sisitimu yekusimudzira ine dhizaini savvy, nzira yekugamuchira vaeni, inokudzwa kufumura Willowbrook Spa, iyo ichangobva kuratidzwa kuThe Lake House kuCanandaigua, hotera yekumberi uye yekugara-yakafemerwa hotera uye spa mune inoyevedza Finger. Lakes nzvimbo yeNew York. Iyi nyowani yekuenda kunzvimbo inotora kurudziro kubva kune yayo iconic nzvimbo yekumhiri uye nerunako rusina kusefa rweMinwe Lakes, inozivikanwa nekuda kwemakadhi-akakodzera maonero emakungwa nemakomo anotenderera uye senharaunda yekurima yakapfuma munhoroondo yemuno.
Nyowani Wellness yekuenda inodzosera uye inofuridzira ne creekside saunas uye mishonga inogadziriswa.
Lake House yakawana kuzivikanwa muCondé Nast Traveler's Hot List 2021 senge pakati pezvakanakisa nyowani: mahotera pasi rese, mahotera akasimba mupasi rose, mahotera muUS neCanada, uye mahotera echisikigo kutenderera pasirese.
Willowbrook Spa inozadza iyo hotera vibe nekusvikirwa kwakanangana nebindu rakasvibira, rakadzikama kumberi kwegungwa, uye kurapwa.
Kana Iyo Lake House yakavhurwa zhizha rapfuura, panguva ye COVID-19 denda, kudzoka kumatunhu ekufamba uye kunonoka kushanya kwakaburitsa buzz huru yeiyo chivakwa, uko nzvimbo dzekunze nekunze dzinoyerera zvakasarudzika mukati meumwe nekugadzira kumashure kwakanaka kwezviyeuchidzo zveupenyu hwese. Ichangoburitswa muTravel + Leisure's Iyo Rondedzero 2021, sarudzo yemahotera nyowani nyowani pasi rose, Iyo Lake House yakawanawo kuzivikanwa muCondé Nast Traveler's Hot Rondedzero 2021 seimwe yeakanakisa mahotera nyowani mupasi, yakanakisa nyowani. kutsigira mahotera munyika, emahotera matsva akanakisa muUnited States neCanada, uye iwo mahotera emhando yepamusoro akanakisa epasirese. Achichinjisa nzvimbo dzinoyevedza dzepanyama, Willowbrook Spa inozadza inoyevedza yehotera, yakareruka vibe nekunanga kwakanangana nebindu rakasvibira uye rakadzikama kumberi kwegungwa, uye marapirwo anoenderana nezvinangwa zvevaenzi zvakanaka.
"Willowbrook Spa inoteerera kumashure kune yakafanana analogue yekupemberera kubatana kwevanhu, kufamba kunononoka kwehupenyu, uye zviitiko zvekunze," anodaro Lee. "Tiri kushandisa hunyanzvi hwenzanga yepasi-pasi uzivi uye kubatana nenyika zvakasikwa kuburikidza neiyo spa dhizaini yezvigadzirwa, zvigadzirwa zvakachena zvinoshanda, uye nemhedzisiro inofarirwa."
Musanganiswa wezviitiko - zvinosanganisira waini nyika mararamiro uye zvigadzirwa zveculinary - Willowbrook Spa ndeyechisikigo chekusimudzira kuhutano mumhando dzakawanda, kubva pakufunga kwekufamba pakati penzvimbo dzakadzikama kune kurapwa kwekunze uye kupera kwevhiki. Sezvo dunhu reFinger Lakes rinozivikanwawo senzvimbo yepamusoro yewaini kuEast Coast yeUnited States, TLEE Spas yakatarisa kunzvimbo inozivikanwa, nyika yewaini yeCalifornia, uye zvinhu zvakasanganiswa zvakabatsira kutsanangura iyo yakasarudzika mararamiro mune itsva spa chiitiko. Iyo Sun Kamuri inzvimbo yekutandarira inoratidzira kuwanda kwechiedza chechisikigo, mhepo nyowani, uye maonero anokurudzira kune iyo Spa Bindu, iyo inosanganisira matatu epachivande echiyoni sauna pods ine mvura yekunze uye nzvimbo dzekuzorora dzinoumba yega-ine al fresco musiyano wekugeza wedunhu. kune vanhu vamwe, vakaroora kana mapoka madiki. Pakati penzvimbo dzakatenderedza, sarudzo dzakawanda dzekugara dzinowedzera ruzivo rwekugara mukati mekunze, zvichipa mamiriro akafemerwa ekufungisisa kana ungano yakachengeteka yemagariro.
Rakafuridzirwa nenharaunda yakapfuma yekurima, iyo yakapa kumutsidzira kwekurima kwepasi-kirasi zvigadzirwa zvekubika uye kumutsiridzwa kwemishonga yekurapa, Willowbrook Spa inoshandisa mushonga wezvirimwa kusimudzira hutano hwakakwana uye inosanganisira zvinokwidziridzwa zvekuzorodza kusimudzira ruzivo rwevaenzi. Nechinangwa zvakapusa uye zvine hungwaru zvakarongedzwa, iyo spa menyu inopa imwe-ye-ye-mhando zviitiko, zvinosanganisira chikamu-chakavakirwa ganda rekurapa uye iyo siginecha yechisimba yekupa iyo mapairi maitiro ekurongedzwa nemishonga-yakaputirwa nemafuta uye mishonga yemusoro kuti ubatsire intuitive njere yeiyo murapi. Kubudikidza nemhando dzakasiyana dzezvipiriso zvinokwezva zvakaenzana kune novice uye kufa-hards zvakafanana, Willowbrook Spa inokoka vashanyi kusimudzira mararamiro avo ehupfumi pamwe nekuderedza, kudzorerazve, uye kugadzirisa patsva pamhenderekedzo yegungwa yeCanandaigua Lake chirimo ichi uye kudonha.
Pamusoro peWillowbrook Spa, TLEE Spas ichangobva kugadzira chirongwa cheThe Seawater Spa kuGurney's flagship Montauk Resort, yakarongerwa kuvhura mukupera kwa2021 kumucheto kwekumabvazuva kweLong Island. TLEE Spas yakanangana nekusimudza mhando yehutano kumatsime emvura yegungwa akasarudzika uye nzvimbo yepamberi pegungwa, uko kupora kwepanyama kwemaminera-akapfuma emvura uye mweya une munyu-unotora nzvimbo yepakati. Willowbrook Spa kuThe Lake House uye Iyo Seawater Spa kuGurney's Montauk ichaita chinzvimbo chakakosha mukusimudzira ruzivo rwehutano munzvimbo dzadzo dzegungwa nemahombekombe egungwa, ichikoka vashanyi kuti vabatanidze zvisikwa mukati menzvimbo dzekuvandudza hutano dzakaumbwa neakasarudzika nzvimbo saiti uye mamiriro enzvimbo. .
Nezve TLEE Spas
TLEE Spas inounza iyo isingaenzaniswi nhanho yekuda, hunyanzvi uye kuchinjika mukugadzirwa kweasarudzika spas uye hutano zviitiko. Ivo vanosvika purojekiti yega yega nemeso matsva, vachitsvaga nzira dzekukwidziridza bhawa nekuisa parutivi, iine rekodhi rekodhi yekubudirira kuburikidza neunganidzwa wemapurojekiti anokunda mibairo, vatengi vanonzwisisa uye marangi anotungamira. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve TLEE Spas, shanya www.tinopek.com .